हव्वाले धोका खाई यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस् – Word of Truth, Nepal
हव्वाले धोका खाई यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्
“धोका दिनु” को अर्थ हो छल्नु, बहकाउनु, झुक्याउनु, झूटो कुरा सत्य भएको भान पार्नु। जादुगरले मान्छेको आँखा छलेर आफूले देखाएको चटक साँच्चीकै हो भन्ने भान पार्छ र दर्शकलाई झुक्याउँछ।
“म त धोकामा परेको छैन” भनी नठान्नुहोस्। तपाईं धोकामै परिरहनुभएको हुन सक्छ। धोकामा पर्नु ज्यादै सजिलो छ!
यस घटनाको बारेमा जान्न हामी उत्पत्तिको पुस्तकलाई पल्टाऔ। उत्पत्ति अध्याय १ मा “परमेश्वरले भन्नुभयो…तब त्यस्तै भइहाल्यो” भन्ने वाक्यांश कतिपल्ट भेटिन्छ? (उत्पत्ति १ मा उक्त वाक्यांश पाइने पदहरू कुन-कुन हुन्? _____________________________) परमेश्वरले जे-जे भन्नुभयो, ती एक-एक पूरा भए।
उत्पत्ति अध्याय २ मा आएर हामी सिक्छौं, परमेश्वरले एउटा ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। उत्पत्ति २:१७ मा हेर्नुहोस्। परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, “यदि तिमीले खायौ भने…यस्तो हुनेछ (के हुनेछ)?” __________________________________________।
धोकेबाजले शुरूमा के भन्यो? “_____ _______________ले तिमीहरूलाई बगैंचाको कुनै पनि रूखको फल नखानू भनी _____________________ ____ (उत्पत्ति ३:१)? हव्वाले परमेश्वरको वचनलाई शङ्का गरोस् भन्ने शैतान चाहन्थ्यो। “परमेश्वरले साँच्चै त्यस्तै भन्नुभएको हो र? पक्का हो र?”
“तँ _____________ नै _____________”
जुन बेला हामी परमेश्वरको वचनसित खेलबाड गर्न थाल्छौं त्यस बेला हामीलाई “खतरा! खतरा!” भनिरहेका सङ्केतहरूले घेर्न थाल्छन् — हामी पहिले शङ्का गर्न थाल्छौं अनि पछि ठाड़ै इन्कार गर्न पुग्छौं। त्यसपछि अरूलाई हाम्रो पक्षमा ल्याउन खोज्छौं। याद राख्‍नुहोस्, अरूलाई समेत आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकियो भने खतरनाक स्थिति पनि उति खतरनाक नभएझैं लाग्ने हुन्छ!
उत्पत्ति ३:६ – “आदम, मलाई साथ देऊ न!” हव्वाले अर्को व्यक्तिलाई अपराधमा मुछ्ने काम गरी। उसले अर्कोलाई समेत खिँची।
हाव्वाले अर्को व्यक्तिलाई फसाई। सत्यताबाट र परमेश्वरबाट अन्यत्र खिँचिनेहरू आज धेरै छन्। १ कोरिन्थी १५:१२ आनुसार त्यहाँ यस्ता मानिसहरू थिए जसले मरेकाहरूको __________________ हुँदैन भन्ने कुरा सिकाउँदै थिए (मत्ती २२:२३ पनि हेर्नुहोस्)। कोहीचाहिँ पापले यति भ्रमित र अन्धा भएका थिए कि तिनीहरूले येशूलाई “त्यस ______” (मत्ती २७:६३) भन्न समेत पछि परेनन्। खास धोकेबाजहरू (ठगहरू) को थिए (मत्ती २८:११-१५)?_____________________________________।
“कल्ट” (झूटा शिक्षाको समूह) हरूले मानिसहरूलाई कसरी ठग्छन् र धोका दिन्छन्? केही उदाहरणहरू दिन सक्नुहुन्छ?
“तिमीहरू परमेश्वरजस्तै हुनेछौ”
हव्वालाई धोका दिन शैतानले “तिमीहरू परमेश्वरजस्तै हुनेछौ” भन्दै झूटो प्रलोभन देखाए। हव्वाले त्यस झूटलाई पत्याएकीले धोका खाई। त्यस बेलादेखि नै मानिसहरू शैतानको त्यस झूटद्वारा परीक्षामा पर्दै आएका छन्। मान्छे किन यस प्रकारले धोका खान्छ? के मानिसहरू परमेश्वरै बन्न चाहन्छन् त? अहँ, सामान्य मान्छेको यत्रो लक्ष्य हुँदैन! वास्तवमा कुरा यस्तो हो: मान्छे परमेश्वरलाई परमेश्वरको रूपमा स्वीकार्न चाहन्न। मान्छे परमेश्वरलाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न तथा अन्तिम फैसला गर्ने अख्तियारको रूपमा स्वीकार्न चाहन्न। मान्छे परमेश्वरका कुरा मान्न चाहन्न। “यदि अन्य कोही व्यक्ति ईश्वर बन्न सके भने हामीले परमेश्वरलाई परमेश्वरको रूपमा मान्नु पर्दैन भनेर आफूलाई मनाउन सकिन्छ।”
यसको उदाहरण १ शमूएलको आठौं अध्यायमा पाउँछौं जहाँ इस्राएलीहरूले अन्य राष्ट्रका जस्तै राजा चाहे (पद ५)। ती मानिसहरू राजा बन्न चाहेका त थिएनन्, तर तिनीहरूले परमप्रभुलाई आ______ रा _______ ब_________ इन्कार गरेका थिए (१ शमूएल ८:७ मा हेर्नुहोस्)। “हामी तपाईंलाई राजा बनाउन चाहन्छौं। परमेश्वरसट्टा तपाईं नै राजा हुनुभएको हामी चाहन्छौं।”
मरियम एक स्त्री थिइन् जसले धोका खाइनन्। परमेश्वर उनीसँग बोल्नुहुँदा मरियमले उहाँको वचनलाई विश्वास गरिन् (लूका १:३०-३८)। परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई नबुझे तापनि उनले विश्वास गरिन् र यसरी भनिन्, “_____________को_____________अनुसार नै मलाई होस् (लूका १:३८)।”
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 16:30:592020-04-28 14:41:16हव्वाले धोका खाई यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्